बजारमा कालोबजारी भएको पाए सिधै ९८२३–२३७५८८ मा डिजीलाई फोन गर्नुहोस्’
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादवले अहिले चिनीको अभाव नभएको र बजार भाउपनि नबढेको स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री यादवले उपभोक्ताले सस्तो..
'को बन्छ ? करोडपति’ को मुख्य प्रायोजक कोकाकोला
काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय लोकप्रियता हासिल गरेको टि भी कार्यक्रम ’ हु वान्ट्स टु बी ए मिलिओनैरे’ को नेपाली संस्करण अब नेपालीमापनि आउँदैछ । उक्त कार्यक्रमको नाम ’को बन्छ करोडपति’ राखिएको छ..
नयाँ नोटको सटही शुरु, कहाँ–कहाँ पाइन्छ ?
काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड दशैंलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतवारबाट नयाँ नोटको सटही शुरु गरेको छ । सर्वसाधारणले असोज २९ गतेसम्म नयाँ नोट साट्न पाउने राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको..
व्यापार घाटा दुई महिनामा सवा दुई खर्ब रुपैया पुग्योे
काठमाडौं । निर्यातको तुलनामा आयात हुने वस्तुको परिणाम उच्च हूँदा नेपालको वैदेशीक व्यापारको अवस्थामा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । चालु आर्थिकवर्षको पहिलो दुई महिना अवधिमा व्यापार घाटा सवा दुई..
दोलखा । दोलखामा सुनको अक्षरले देखिएको दुर्लभ पुस्तक भेटिएको छ । उक्त पुस्तक करोडौं मूल्यमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले बोकेर हिडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । तिब्बती भाषाको सुनका..
अमेरिकी डलरको भाउले ११८ रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौ। अमेरिकी डलर सर्वाधिक बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि एक डलरको भाउ ११८ रुपैयाँ ३ पैसा तोकेको छ। यसअघि ११७ रुपैयाँ ६५..
एप्पल बन्यो संसारको नम्बर १ बहुमुल्य ब्रान्ड, फेसबूक चिप्लियो नवौं स्थानमा
काठमाडौं । विश्वव्यापी ब्रान्ड कन्सल्टेन्सी इन्टरब्रान्डले बेस्ट १०० ग्लोबल ब्रान्ड्स २०१८ को सूची जारी गरेको छ । उसका अनुसार, गूगललाई पछि पार्दै एप्पल संसारको शीर्ष ब्रान्ड बनेको छ । उता डाटा..
दशै स्किम: आइएमइ पेबाट टिकट काटेमा १० रुपैयाँमै हवाइ यात्रा गर्न सकिने
काठमाडौं। आइएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित ‘आइएमई डिजिटल’ द्वारा प्रवद्र्धित ‘आइएमई पे’ ले दशैंमा आफन्तसँगको भेटघाटलाई सुलभ र सहज तुल्याउन हवाई टिकट स्किम सार्वजनिक गरेको छ। स्किमअन्तर्गत बुद्ध, यती, तारा, सौर्य, श्री..
दशैं आई सक्यो, चामल आएन विकट क्षेत्रमा, कारण यस्तो छ
गोरखा । दशैँ नजिकिँदै गर्दा गोरखाको विकट उत्तरी क्षेत्रका लागि सरकारले सहुलियतमा दिने गरेको चामल अझैसम्म पुग्न सकेको छैन । उत्तरी क्षेत्रका साविकका १३ गाविसका स्थानीयवासीलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्न लैजानुपर्नेमा..
गाडी भाडा एकरूपैयाँ बढी लिए पाँच हजार जरिवाना
काठमाडौँ। सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए टेलिफोनमार्फत् सवारी साधनको नम्बरसहित जानकारी गराउन यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको छ । सरकारले पटक–पटक तोक्ने गरेको भाडादर सवारी साधनका चालकले अझै लागू..
५ करोड प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट ह्याक भएपछि यूरोपमा फेसबूकलाई साढे १ खर्ब बढी जरिवाना
बस्रेल्स । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकलाई यूरोपमा जरिवाना तिराइएको छ । गत हप्ता मात्रै फेसबूकका ५ करोड प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट ह्याक भएको थियो । यसै मामिलामा यूरोपेली सङ्घको गोपनियता हेर्न निकाय कम्पनीलाई..
साझाका डिलक्स बसले पर्सिदेखि दसैँका यात्रु ओसार्ने, हेनुहोस् कुन कुन जिल्लामा जादैछ साझा
काठमाडौं । साझा यातायातका डिलक्स बसले मंगलबारदेखि दसैँका यात्रु ओसार्ने भएका छन्। मंगलबारबाट दैनिक २ डिलक्स बसले काठमाडौंदेखि बागलुङ र काठमाडौंदेखि सुनौलीसम्म रात्रिकालीन सेवा दिने भएको हो। साझासँग हाल ४..
काठमाडौँ । अबदेखि नेपालका ग्यास बुलेटले नै खाना पकाउने ग्यास आयात गर्ने भएका छन् । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच आज भएको दुई पक्षीय वार्तामा नेपालका ५३ ग्यास बुलेटले खाना पकाउने..
आजदेखि दसैँको सुपथ पसल, कुन सामान कतिमा पाइन्छ हेर्नुहोस मूल्य
काठमाडौं । दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले आजदेखि देशका विभिन्न भागमा सुपथ मूल्य पसल संचालन गरेको छ। कात्तिक २७ गतेसम्म संचालन हुने यस्ता पसलमा दैनिक उपभोग्य बस्तु सस्तो..
दशैंको सस्तो मेला, एकै ठाउँमा सस्तो मूल्यमा छानिछानी सामान पाइने
काठमाडौं । दशैंका लागि आवश्यकब सामग्री किन्न कता जाने भन्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एकै छानामुनी सस्तोमा धेरै किसिमका सामान किन्न पाइने भएको छ । दशैंलाई लक्षित गर्दै राजधानीको भृकुटीमण्डमा..
दशैं घर जाने टिकट यसरि आफ्नै मोवाईलबाटै काट्नुस
काठमाडौं। अनलाइनबाट बसको टिकट काट्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवा डटकममा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएको छ। बुकिङ खुला भएसँगै अबदेखि यात्रुहरूले अनलाइनबाटै दशैंको लागि दुई तर्फी आउनेजाने अग्रिम..
गाडी भाडा बढेपछि, भोलीबाट खुल्यो टिकट बुकिङ
काठमाडौं। दशैंका लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ मंगलबारबाट खुल्ने भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको बैठकले असोज ९ गते मंगलबारदेखि बुकिङ खोल्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि भदौ ३१ गते बसेको..
बढेपछि तपाईको रुटमा सार्वजनिक सवारीको भाडा कति पुग्यो ?(नयाँ भाडादर सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार यातायात व्यवसायीसँग १० प्रतिशत भाडा बढाउन सहमति जनाएको सरकारले आइतबार नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य..
दसैँको सुपथ पसल १२ गतेदेखि, कुन सामान कतिमा पाइन्छ हेर्नुहोस मूल्य
काठमाडौं । दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले असोज १२ गतेदेखि देशका विभिन्न भागमा सुपथ मूल्य पसल संचालन गर्ने भएको छ। कात्तिक २७ गतेसम्म संचालन हुने यस्ता पसलमा दैनिक..
आइएमर्इमार्फत पैसा पठाउनेले २० लाख रुपैयाँ जित्नसक्ने
काठमाडौं । आइएमर्इ रेमिटेन्स कम्पनीले दशैं,तिहार र छठलार्इ लक्षित गर्दै ‘दशैंमा बीस लाख’ योजना ल्याएको छ। यो योजना आइतबारदेखि मंसिर मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ।योजना अवधिमा स्वदेश तथा विदेशबाट आइएमर्इ..
शिखरले चाडबाडमा ल्यायो १ सयभन्दा बढी मोडलका जुत्ता
काठमाडौं । पार्टी, क्याजुअल र स्पोर्टसमा छान्ने धेरै अवसर जुत्ता पारखीको पहिलो रोजाइमा परेको शिखर सुजले नजिकिँदै गएका बडादशैं, तिहार, छट लगायतका चाडबाडलाई लक्षित गरेर १ सयभन्दा बढी नयाँ डिजाइनका..
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्यले ११७ रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबार डलरको बिक्रीदर मूल्य ११७ रुपैयाँ ०७ पैसा तथा खरिददर मूल्य ११६ रुपैयाँ ४७ पैसा छ। अघिल्लो दिनको..
फेरी बढ्यो तेलको मूल्य, पेट्रोल २ रुपैयाँ र डिजल तथा मट्टितेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं।नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले सोमबार रातीदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल, डिजल तथा मट्टितेलको मूल्य लिटरमा २ रुपैयाँ र ३ रुपैयाँ बढाएको हो। यो मूल्य बढेपछि पेट्रोल..
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, पेट्रोलमा १, डिजल, मट्टितेलमा ३ र ग्यासमा २५ रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले बुधबार रातीदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल, डिजल,मट्टितेल र एलपीजी ग्यासको मूल्य क्रमश एक रुपैयाँ, तीन रुपैयाँ र २५ रुपैयाँ बढाएको..
अहिलेसम्मकै ठूलो १६ अर्ब रुपैयाँको ऋण एनएमबिको नेतृत्वमा ५ बैंकले होङ्सी शिवम सिमेन्टलाई दिने
काठमाडौं । एउटै परियोजनामा अहिलेसम्मकै ठूलो ऋण बैंकहरुले दिन लागेका छन् । एनएमबि बैंकको नेतृत्वमा ५ वटा वाणिज्य बैंकले शिवम होङ्सी शिवम सिमेन्टलाई १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन लागेका हुन्..
आयल निगमले बढायो पेट्रोल, डिजल र हवाइ इन्धनको मुल्य
काठमाडौ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र हवाइ इन्धनको भाउ फेरि बढाएको छ। खाना पकाउने ग्यासको भाउ भने यथावत राखेको छ। आइतबार निगम सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलको एक रुपैयाँ, डिजेलको दुई..
प्राधिकरणको खुद नाफा १ अर्ब नाघ्नेः चुहावट २० प्रतिशतमा सिमित
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रक्षेपित भन्दा बढी आम्दानी हुने जनाएको छ । सो आवमा प्राधिकरणले रु एक अर्ब एक करोड खुद नाफा आर्जन हुने..
एक हजार ९१५ फर्ममा आपूर्तिको छापा, मूल्यसूची, बिलविजक राख्न निर्देशन
काठमाडौँ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आवको असार मसान्तसम्ममा एक हजार ९१५ वटा व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेको छ। विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरोकार पक्षको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रत्यक्षरुपमा अनुगमन..
ललितपुर । साझा यातायातले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर चल्ने गरी नयाँ २४ वटा बस थप गर्ने भएको छ । तीमध्ये चारवटा डिलक्स र २० वटा सिटी बस रहेको साझा यातायातका..
अनमोल केसी बेनेलीसँगै अब 'क्याप्स' ब्राण्डको एम्बासडर
काठमाडौँ । चर्चित अभिनेता अनमोल केसी 'क्याप्स' ब्राण्डका लागि एम्बासडर बनेका छन्। १ वर्षका लागि उनको तस्विर उक्त ब्राण्ड नेपालमा प्रचारका लागि प्रयोग हुनेछ। अन्तराष्ट्रिय लुगा ब्राण्डसँग अनमोलले १५ लाखभन्दा बढी..
Results 889: You are at page7of 30